Ilay Resabe Momba ny Charango · Global Voices teny Malagasy
Ilay Resabe Momba ny Charango
Voadika ny 18 Oktobra 2018 13:58 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2006 )
Nosoratan'i Miguel Esquirol ity lahatsoratra ity ary nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny vondrom-piarahamonin'ny blaogy Bolivianina “Blogs de Bolivia”. Afaka jerena eto (ES) ny dikany voalohany indrindra amin'ny teny Espaniola.
Tato ho ato, natolotra ho fanomezana ny charango maro. Nanolotra iray tamin'izany an'i Condoleeza Rice i Evo Morales, nanome iray ho an'i Bono ihany koa ny Filoha Shilianina, nipoitra àry ny adihevitra momba ny ”toetra manokana ara-moraly” ananan'ity zavamaneno ity (ES). Nandefa taratasy ho an'i Bono mihitsy aza i Edgar Arandia, Minisitra lefitra misahana ny Kolotsaina ao amin'ny governemantan'i Morales, manazava fa zavamaneno Bolivianina ny charango raha ny tena marina.
Nanararaotra izany mba hanomezana famintinana fohy momba ilay tantaran'ity zavamaneno tena tsara tsara tarehy ity ny mpanoratra hira/blaogera tianay indrindra, i Grillo Villegas (ES) ary nampiseho fa: voalohany aloha, tsy Bolivianina (na koa Shiliana) izy ity ary faharoa, tsy dia misy dikany avokoa izany rehetra izany. Ny tena zava-dehibe dia ny feo mampihetsipo avoakan'ireo mpitendry mozika avy amin'ilay zavamaneno. Ity misy ampahany tamin'izany lahatsorany izany:
Nandritra ny fanjanahantany, nentin'ireo Espaniola nankany Amerika ilay zavamaneno mampiasa ny tady antsoina hoe ”vihuela”, miaraka amin'ny tady 6 na 7 verindroa fa samihafa refy sy lamina. Nampiasaina indrindra tany amin'ny taonjato faha-16 tao Espaina izy ity ary niteraka famoahana mozika an-tsoratra maro. Rehefa tonga tao amin'ny kaontinanta Amerikanina, naka singa maro mampiavaka azy avy amin'ny isam-paritra ity zavamaneno ity ary namokatra fitaovana safiotra maro fanaovana mozika vita amin'ny tady, avy any Meksika ka hatrany Bolivia. Nanoratra boky maro toy ny ”Ny charango, ny fiainany, ny fombany sy ny fahoriany” ary ny ”Ny zavamaneno fanaovana mozika ao Bolivia” ny goavan'ny fitendrena charango sady mpikaroka Ernesto Cavour, izay nanamarihany fa taorian'ny nitsidihany tranombakoka Eoropeana maro, nitovy endrika, feo ary refy tamin'ny charango ny ”vihuela”. Tena voarakitra tsara ao amin'ny firaketena nasionaly, any amin'ny sary sokitry ny fiangonana San Lorenzo ao Potosí ary any amin'ny hosodoko maro isankarazany tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany ny fahatongavana sy fametrahana ity zavamaneno ity.
Ny hany mba zavatra irianay dia ny mba tsy hahasimba ny fihatsaran'ny fifandraisana amin'i Shili noho ny pitsopitson-javatra tokony hanambatra fa tsy hanasaraka ireo firenena roa ireo. Ny lafiny tsara kosa, tsy hisintona afa tsy fahalianana bebe kokoa amin'ny charango ity fahalianana vao haingana amin'ity zavamaneno ity.